Ny Bokin’ i Nefia Zanakalahin’ i Nefia, izay Zanakalahin’ i Helamàna
Ary i Helamàna dia zanakalahin’ i Helamàna izay zanakalahin’ i Almà, izay zanakalahin’ i Almà, izay tamingan’ i Nefia izay zanakalahin’ i Lehia izay nivoaka avy tao Jerosalema tamin’ ny taona voalohan’ ny fitondran’ i Zedekià, mpanjakan’ i Joda.
I Nefia, zanakalahin’ i Helamàna, dia nandeha niala ny tany, ary i Nefia zanany no nitana ny rakitsoratra—Na dia sesehena aza ny famantarana sy ny zava-mahagaga, dia nitetika ny handringana ny marina ny ratsy—Tonga ny alin’ ny fahaterahan’ i Kristy—Nomena ny famantarana ary nitranga ny kintana vaovao—Nitombo ny fandaingana sy ny famitahana, ary nandripaka maro ny jirik’ i Gadiantôna. Tokony ho 1–4 taorian’ i J.K.
Nitombo teo anivon’ ny vahoaka ny faharatsiana sy ny fahavetavetana—Nitambatra ny Nefita sy ny Lamanita mba hiaro ny tenany tamin’ ny jirik’ i Gadiantôna—Nanjary fotsy ny Lamanita niova fo ary nantsoina hoe Nefita. Tokony ho 5–16 taorian’ i J.K.
I Gidiania, ilay mpitondra ny Gadiantôna, dia nitaky ny hanoloran’ i Lakôneo sy ny Nefita ny tenany sy ny taniny—Nanendry an’ i Gidgidônia i Lakôneo ho lohan’ ny kapitenin’ ny miaramila—Nivory tao Zarahemlà sy Soafeno ny Nefita mba hiaro tena. Tokony ho 16–18 taorian’ i J.K.
Nandresy ny jirik’ i Gadiantôna ny miaramila Nefita—Novonoina i Gidiania ary nahantona i Zemnarià mpandimby azy—Nankalaza ny Tompo ny Nefita noho ny fandreseny. Tokony ho 19–22 taorian’ i J.K.
Nibebaka sy nahafoy ny fahotany ny Nefita—Nanoratra ny tantaran’ ny vahoakany i Môrmôna ary nanambara taminy ny teny maharitra mandrakizay—Hangonina avy amin’ ny fielezany ela i Isiraely. Tokony ho 22–26 taorian’ i J.K.
Niroborobo ny Nefita—Nipoitra ny avonavona, ny harena sy ny tsy fitovian-tsaranga—Nosamatsamahan’ ny fisaraham-bazana ny fiangonana—Nitarika ny olona ho amin’ ny fikomiana an-kitsirano i Satana—Niantso fibebahana ny mpaminany maro ary novonoina—Nioko ny haka ny governemanta ny mpamono azy ireo. Tokony ho 26–30 taorian’ i J.K.
Nisy namono ny lohan’ ny mpitsara, noravana ny governemanta, ary nizarazara ho foko ny vahoaka—Nanjary mpanjakan’ ny tsikombakomba miafina i Jakôba, ilay antikristy—Nitory ny fibebahana sy ny finoana an’ i Kristy i Nefia—Nanompo azy isan’ andro ny anjely, ary nanangana ny rahalahiny tamin’ ny maty izy—Nibebaka ny maro ary natao batisa. Tokony ho 30–33 taorian’ i J.K.
Nanamarina ny fanomboana an’ i Kristy ny tafiotra, ny horohoron-tany, ny afo, ny tadio ary ny loza voajanahary—Nofongorana ny vahoaka maro—Nandrakotra ny tany hateloana ny haizina—Nitaraina ny anjarany ireo izay nijanona. Tokony ho 33–34 taorian’ i J.K.
Tao amin’ ny haizina no nanambaran’ ny feon’ i Kristy ny famongorana ny vahoaka sy ny tanàna maro noho ny faharatsiany—Nambarany koa ny maha-Andriamanitra Azy, nolazainy fa tanteraka ny lalàn’ i Mosesy, ary nasainy nanatona Azy ny olona mba ho voavonjy. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nisy fahanginana teo amin’ ny tany nandritra ny ora maro—Nampanantena ny hanangona ny vahoakany toy ny reniakoho manangona ny zanany ny feon’ i Kristy—Efa notsimbinina ny ampahany marina indrindra tamin’ ny vahoaka. Tokony ho 34–35 taorian’ i J.K.
I Jesoa Kristy dia naneho ny tenany tamin’ ny vahoakan’ i Nefia, raha niara-tafavory tao an-tanin’ i Soafeno ny valalabemandry ary nampianatra azy; ary toy izao no nanehoany ny tenany taminy.
Mahafaoka ny toko 11 ka hatramin’ ny 26 manontolo.
Nanambara ny amin’ ny Zanany Malala ny Ray—Niseho i Kristy ary nanambara ny sorompanavotany—Nitsapa ny mariky ny holatra teo amin’ ny tanany sy ny tongony ary ny lanivoany ny vahoaka—Niantso Hosana izy ireo—Nanazava ny fombafomba sy ny fanao amin’ ny batisa Izy—Avy amin’ ny devoly ny fanahin’ ny fifandirana—Ny fotopampianaran’ i Kristy dia ny hinoan’ ny olona sy ny hanaovana batisa azy ary ny handraisany ny Fanahy Masina. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Niantso sy nanome fahefana ny Roambinifololahy i Jesoa—Nanao lahateny nitovy tamin’ ny Toriteny teo an-Tendrombohitra tamin’ ny Nefita Izy—Niresaka ny Fahasambarana Izy—Mihoatra ary manan-tombo amin’ ny lalàn’ i Mosesy ny fampianarany. Nodidina ho tanteraka toy ny mahatanteraka Azy sy ny Rainy ny olona—Ampitahao amin’ i Matio 5. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nampianatra ny Nefita ny vavaky ny Tompo i Jesoa—Tokony hihary harena an-danitra izy—Nodidina tsy hanan’ eritreritra momba ny zavatra ara-nofo ny Roambinifololahy eo amin’ ny asa fanompoany. Ampitahao amin’ i Matio 6. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nandidy i Jesoa: Aza mitsara; manontania an’ Andriamanitra; mitandrema amin’ ny mpaminany sandoka—Nampanantena famonjena ho an’ ireo izay manao ny sitrapon’ ny Ray Izy—Ampitahao amin’ i Matio 7. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nolazain’ i Jesoa fa tanteraka ao Aminy ny lalàn’ i Mosesy—Ny Nefita no ondry hafa izay noresahiny tany Jerosalema—Noho ny heloka, dia tsy nahafantatra ny amin’ ny ondrin’ i Isiraely niely patrana ny vahoakan’ ny Tompo tao Jerosalema. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Hamangy ny hafa amin’ ny ondry very amin’ i Isiraely i Jesoa—Amin’ ny andro farany dia handeha any amin’ ny Jentilisa ary avy eo dia any amin’ ny mpianakavin’ i Isiraely ny filazantsara—Hahita mifanatri-maso ny vahoakan’ ny Tompo rehefa mamerina indray an’ i Ziona Izy. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
I Jesoa dia nisarika ny olona hisaintsaina ny teniny sy hivavaka hahatakarany izany—Nositraniny ny marary—Nivavaka ho an’ ny vahoaka Izy ka nampiasa fiteny izay tsy hay soratana—Nanompo ny anjely ary nanodidina ny ankizy madininy ny afo. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nampiorina ny Fanasan’ ny Tompo teo anivon’ ny Nefita i Jesoa—Nodidina izy ireo hivavaka mandrakariva amin’ ny Anarany—Voaozona ireo izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany tsy amim-pahamendrehana—Omena fahefana ny mpianatra hanolotra ny Fanahy Masina. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Niahy ny vahoaka ny mpianatra roa ambin’ ny folo ary nivavaka mba handray ny Fanahy Masina—Natao batisa ny mpianatra ary nandray ny Fanahy Masina sy ny fiahian’ ny anjely—Nivavaka i Jesoa sady nampiasa teny izay tsy hay soratana—Nohamarininy ny finoana lehibe fatratra tokoa an’ ireo Nefita. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Namatsy mofo sy divay tamin’ ny fahagagana i Jesoa ary nitsodrano sy nizara ny Fanasan’ ny Tompo ho an’ ny vahoaka—Ho tonga amin’ ny fahalalana ny Tompo Andriamaniny ny sisa tavela amin’ ny taranak’ i Jakoba ary handova an’ i Amerika—Jesoa no ilay mpaminany nitovy tamin’ i Mosesy, ary zanaky ny mpaminany ny Nefita—Ny hafa amin’ ny vahoakan’ ny Tompo dia hangonina ao Jerosalema. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Hangonina i Isiraely rehefa mivoaka ny Bokin’ i Môrmôna—Haorina ho toy ny firenena afaka any Amerika ny Jentilisa—Hovonjena izy raha mino sy mankatò; raha tsy izany dia hojinjaina sy hofongorana—Hanorina an’ i Jerosalema Vaovao i Isiraely, ary hiverina ireo foko very. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Amin’ ny andro farany dia haorina i Ziona sy ny tsatòkany, ary hangonina amin’ ny famindram-po sy ny fahalemem-panahy i Isiraely—Handresy izy ireo. Ampitahao amin’ Isaia 54. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nankatò ny tenin’ i Isaia i Jesoa—Nodidiany ny olona hanadihady ny mpaminany—Nampiana tamin’ ny rakitsoratr’ izy ireo ny tenin’ i Samoela ilay Lamanita momba ny Fitsanganana amin’ ny maty. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Hanomana ny lalana ho amin’ ny Fiaviana Fanindroany ny iraky ny Tompo—Hipetraka eo amin’ ny fitsarana i Kristy–Nodidina Isiraely handoa ny fahafolonkarena sy ny fanatitra—Notanana ny bokin’ ny fahatsiarovana—Ampitahao amin’ i Malakia 3. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Hodorana toy ny vodivary ny mpiavonavona sy ny olon-dratsy amin’ ny Fiaviany Fanindroany—Hiverina i Elija mialohan’ izany andro lehibe sy mahatahotra izany—Ampitahao amin’ i Malakia 3:19–24. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Namelabelatra ny zavatra rehetra hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarana i Jesoa—Nilaza zavatra mahatalanjona izay tsy hay soratana ny zaza sy ny ankizy—Niombonan’ ireo tao amin’ ny fiangonan’ i Kristy avokoa ny zavatra izay nananany teo anivony. Tokony ho 34 taorian’ i J.K.
Nodidin’ i Jesoa izy hiantso ny fiangonana amin’ ny Anarany—Ny asa nanirahana Azy sy ny sorompanavotany no iorenan’ ny filazantsarany—Nodidina ny olona hibebaka sy hatao batisa mba hahazoana manamasina azy amin’ ny Fanahy Masina—Tokony ho toa an’ i Jesoa izy. Tokony ho 34–35 taorian’ i J.K.
Ny sivy tamin’ ny Roambinifololahy dia naniry ary nampanantenaina ny fandovana ny fanjakan’ i Kristy rehefa maty—Ny Nefita telo kosa dia naniry ary nomena ny fahefana amin’ ny fahafatesana mba hitoetra eto an-tany ambara-pahatongan’ i Jesoa indray—Tafafindra izy ireo ary mahita zavatra izay tsy azo ambara, ary ankehitriny izy ireo dia manao asa fanompoana eo anivon’ ny olona. Tokony ho 34–35 taorian’ i J.K.
Ny fivoahan’ ny Bokin’ i Môrmôna dia famantarana iray fa efa manomboka manangona an’ i Isiraely sy manatanteraka ny fanekempihavanany ny Tompo—Ho voaozona ireo izay mitsipaka ny fanambarany sy ny fanomezam-pahasoavany amin’ ny andro farany. Tokony ho 34–35 taorian’ i J.K.
Nodidina ny Jentilisan’ ny andro farany hibebaka, hanatona an’ i Kristy ary horaisina ho isan’ ny mpianakavin’ i Isiraely. Tokony ho 34–35 taorian’ i J.K.